जाग कुलमान, नडराउ अघि बढ्दै जाउ भन्दै नया गीत बजारमा सार्बजनिक भएको छ। देशलाई लोडशेडिंग मुक्त बनाउने नेपाल विद्युत प्राधीकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको समर्थनमा गीत तयार पारिएको छ। देशलाई उज्यालो तर्फ दोर्याएकै कारण चौतर्फी प्रसंसा सहित उनको उच्च मुल्यांकन गरिने गरको छ। प्राधिकरण भित्र रहेको भ्रस्टाचार विसंगतिलाई जरै देखि उखालेर फ्याक्ने काम गरिरहेका छन् । कुनै समय १८-२० घण्टा सम्म अन्धकारमा डुबेको देशको अनुहारमा उज्यालो मुस्कान ल्याउने कुलमानको नाममा धेरै कलाकार ले तारिफ गर्दै यस्तो गीत तयार पारेको हो ।
जय कुलमान भन्दै सब्द रचना गरिएको यस गीतमा, कुलमान तिमीले गर्दा उच्च भाको छ देशको स्वाभिमान भन्दै विभिन्न नाम चलेका कलाकारहरुले गाउदै प्रसंसा गरेका छन् । गीत को सब्द निमा घिसिङ तामाङ्गले लेखेका छन् भने यो गीतलाई कुलेंद्र विश्वकर्माले गाएका छन् । गीतमा कलाकार संकर बिसी, सबिन पोखरेल, पार्वती राई, दुर्गेस थापा, महेन्द्र गौतम, आशा खड्का, कजिषा श्रेष्ठ, सुरबीर पण्डित, शिवहरी पौडेल, यादव देवकोटा, र बिमल अधिकारीको अभिनय रहेको छ । प्रियसी म्युजिक नामक युट्युब च्यानलले यस गीत लाइ सार्बजनिक गरेको छ।
जलश्रोत भण्डार भएपनि दैनिक १८-२० घण्टा सम्म अन्धकार मा बस्नु परेको मारमा परेका नेपालीहरुका लागि कुलमान देवता भन्दा कम छैनन् । अब देश सधै अन्धकारमा नै डुबिरहने होकी भन्ने सबैको पीडालाई चिर्दै दशकौ देखि चलिरहेको लोडसेडिङलाइ अन्त्य गर्न आए कुलमान। बैज्ञानिक ब्यबस्थापन गर्दै कुलमान नेतृत्वले लोडसेडिङ मुक्त देश नेपाल बनाए । जसको तारिफ मा नेपाली जनताहरु रात दिन उनको समर्थन गरिरहेका छन् गुणगान गरिरहेका छन् । हेर्नुस कुलमानको समर्थनमा बनेको यो गीत
रविको सिधा कुरा : " भ्रस्टले दिएको पैसाले दाल भात खानु बिष खाए जस्तो "
१५ बर्षमै होटल चलाउने चर्चित दाजुभाइको ' मेरी बास्सैमा' बेजोड अभिनय .........हेर्नुस भिडियो
Previous Article बाल गायक प्रितमले सलमानलाइ बनाए फ्यान, सलमान कट्रिनाले गरे खुलेर तारिफ – भिडियो
Next Article तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आज आइतबारको राशिफल
One Comment on “जाग कुलमान ! बनायौ देशको उच्च स्वाभिमान भन्दै आयो यस्तो गीत – भिडियो सहित”
rajju raj tuladhar says: